U.S. to push U.N. for sanctions against Mugabe - Washington Times
U.S. to push U.N. for sanctions against Mugabe
Jon Ward The Washington Times - June 28, 2008, 11:11AM
President Bush this morning said in a statement that the U.S. government will impose unilateral sanctions against Zimbabwe leader Robert Mugabe, and will press for international sanctions at the United Nations, following his “sham” election on Friday.
“On Friday, the Mugabe regime held a sham election that ignored the will of the people of Zimbabwe,” Mr. Bush said. “Any legitimate government of Zimbabwe must represent the interests of all its citizens and the outcome of the March 29 elections.”
“Given the Mugabe regime’s blatant disregard for the Zimbabwean people’s democratic will and human rights, I am instructing the Secretaries of State and Treasury to develop sanctions against this illegitimate Government of Zimbabwe and those who support it,” Mr. Bush said.
“We will press for strong action by the United Nations, including an arms embargo on Zimbabwe and travel ban on regime officials.”
— Jon Ward, White House correspondent for The Washington Times